ခေါင်းဆောင်ကောင်းထက် နောက်လိုက်ကောင်းဖြစ်ဖို့လို… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » ခေါင်းဆောင်ကောင်းထက် နောက်လိုက်ကောင်းဖြစ်ဖို့လို…
Posted by manawphyulay on Jun 16, 2015 in Community & Society, Creative Writing | 17 comments
ခေါင်းဆောင်တဲ့။ ဘယ်လိုအရာတွေကိုခေါင်းဆောင်လို့ ခေါ်တာလဲ။ ဘယ်လိုလူမျိုးတွေကိုသတ်မှတ်တာလဲ။ ကိုယ်က ခေါင်းဆောင်လား ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်မှာခေါင်းဆောင်ရှိရဲ့လား စဉ်းစားကြည့်မိပါသည်။ ဒီအတိုင်း ခေါင်းဆောင် ဆိုတဲ့ နာမည်ခံနေရုံနဲ့တော့ ခေါင်းဆောင် ဒါမှမဟုတ် ဦးဆောင်သူလို့ ခေါ်ထိုက်သလားစဉ်းစားဖို့ လိုလာပါပြီ။ ဘယ်နေရာမဆိုသူ့နေရာနဲ့သူတော့ ဦးဆောင်သူဆိုတာရှိစမြဲပါပဲ။ အိမ်မှာလည်းအိမ်အလျောက် ရုံးမှာ ဒါ့အပြင် အသင်းအဖွဲ့တွေမှာကော Leader လို့ ခေါ်တဲ့ ဦးဆောင်သူတွေ တွေ့ရှိရမှာပါ။ ခေါင်းဆောင် အကြီးအမှူးဆိုတာနာမည်ကြားလိုက်ရုံနဲ့ ခွန်အားပြည့်သွားသလို၊ အားမာန်တက်သွားသလို၊ လုံခြုံသွားသလို ခံစားမှုမျိုးဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ဥပမာ ကျွန်မတို့ရဲ့ဖခင်ကြီးလူတိုင်း နိုင်ငံတိုင်းကကမ္ဘာကပါ အသိအမှတ် ပြုထားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည်လည်း Leader ကောင်းတစ်ဦးပါလို့ ပြောရင် သင် ငြင်းနိုင်ဦးမှာလား။ နောက် မမေ့နိုင်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည်လည်း ရှိပါသေးသည်။ ဘုရင့်နောင်ဖောင်ဖျက်သည် ဆိုတဲ့ စကား ခုချိန်တိုင် သုံးစွဲနေကြသေးသည်ကို တွေ့ရှိနေရသေးသည်။ နောင်ရိုးတိုက်ပွဲ ဘာကြောင့် အောင်မြင်ခဲ့သလဲ ခေါင်းဆောင်ကောင်း၏ စစ်မှန်သောဆုံးဖြတ်ချက်ဟုပြောလျှင် လွန်အံ့မထင်ပေ။
ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အကြီးအမှူးဆိုသူကိုကိုယ်တွေ့၊ ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ပြီးအကောင်းဆုံးကိုမှ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားကြတာမို့ သူရဲ့နှုတ်ထွက်စကားတိုင်းဟာကိုယ်တွေအတွက်တော့ ကျိန်ပြောတာထက် ခိုင်မာတဲ့စကားမျိုးလို့ ယူဆကြပါသည်။ ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းအနေအစားချောင်လို့ ခေါင်းဆောင် နေရာ ယူထားပြီး ကိုယ့်အတွက်ပဲကိုယ် ကြည့်နေသူကိုခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ဦးလို့ သတ်မှတ်ထားသင့်ရဲ့ လား။ ဒါမှမဟုတ် ခေါင်းဆောင်ဆိုသူကသူ့ဘာသာ ပြန်စဉ်းစားရမယ့်အချက်က ငါဟာ ခေါင်းဆောင်ပီသရဲ့လား ဆိုတာပါပဲ။
ခေါင်းဆောင်ကောင်းရင် ကောင်းသလို၊ မကောင်းရင် မကောင်းသလိုသူ့ရဲ့နောက်ပါ အောက်လက် ငယ်သားတွေကိုအနည်းနဲ့အများတော့ အကျိုး(ကောင်းကျိုး-ဆိုးကျိုး) သက်ရောက်မှုရှိတတ် ပေသည်။ အကယ်၍ သင်က ခေါင်းဆောင်နေသည်ဟု ယူဆသော်လည်း မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ သင့်နောက်က လိုက်ပါမလာကြသည့်အခါ သင်သည် လမ်းလျှောက်ထွက်နေခြင်းသာလျှင် ဖြစ်သည်ဟု ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် သက်ဆိုင်သောစကားပုံတစ်ခုကိုလေ့လာဖတ်ရှုမိပါသည်။ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူသည် စိတ်ကူး စိတ်သန်းများနှင့် အသိပညာအတတ်ပညာတို့ကို မျှဝေခံစားခြင်းဖြင့် အခြားသူများအားစိတ်အားထက်သန်မှုနှင့် အရေးတကြီးဆောင်ရွက်ရမည့် အနေအထားကို ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ရပါမည်။ ခေါင်းဆောင်ကောင်းသည် မှန်ကန်သောဘက်မှ အမြဲရပ်တည်နိုင်ရပါမည်။ သမာသမတ်ကျသောလုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့် ကိုယ့်ရဲ့ လက်အောက်ငယ်သားများကိုကျောသားရင်သားမခွဲခြားပဲတစ်ဖြောင့်တည်းဆက်ဆံတတ်ရပါမည်။
ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်သည် သူ ကြားချင်သည့် စကားများကိုသာမဟုတ်ဘဲသူ ကြားရန် လိုအပ်သည့် စကားများကိုလည်းပြောပြကြရန် ၎င်း၏ နောက်လိုက်များအားတိုက်တွန်းအားပေးလေ့ရှိပါသည်။ ခေါင်းဆောင်ဆိုသူကိုယ်တိုင်ကလည်း ‘ငါ ခေါင်းဆောင်ပဲ’ ဆိုတဲ့ အတ္တ၊ မာနတွေကိုဘေးဖယ်လို့ မြင့်မြတ် မှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ အများကောင်းကျိုးကိုသာ ကြည့်တတ်သူ ဖြစ်နေဖို့ လိုအပ်လှပါသည်။ လောကီရေးရာတွေမှာ ခေါင်းဆောင်အရွေးမှားရင် လက်ရှိဘ၀တစ်ခုတည်း ဒုက္ခရောက်မှာ ဖြစ်သလို လောကုတ္တရာရေးရာမှာလည်း အလားတူအရွေးမှားရင်တော့ တစ်ဘ၀တည်း မဟုတ်ဘဲ တစ်သံသရာလုံး အရှုံးကြီးရှုံးရပါလိမ့်မည်။ နှစ်သက်မိသည့် စကားပုံလေးတစ်ခုကတော့ “သင့်ဖယောင်းတိုင်က အခြားဖယောင်းတိုင်အား မီးညှိပေးလိုက်သည့်အခါ သင့်ဖယောင်းတိုင်ကမည်သည့်အရာကိုမျှ ဆုံးရှုံးသွားခြင်း မရှိပါ” ဆိုတာလေးကိုလည်းသဘောကျ နှစ်ခြိုက်မိပါသည်။
ခေါင်းဆောင်ကောင်းကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အသေအချာရွေးချယ်သတ်မှတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ နောက်တစ်ဆင့် အနေဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကနောက်လိုက်ကောင်းပီသအောင် ကြိုးစားရဦးမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဒါမှသာခေါင်းဆောင်ကောင်းနောက်လိုက်ကောင်းတွေ ပြည့်စုံနေတဲ့ အ၀န်းအ၀ိုင်းလေးရဲ့ ဆောင်ရွက်မှုတိုင်းက ဘယ်နေရာမဆို အစစအရာရာ အဆင်ပြေအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်။ ‘သြော်’ ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးက တစ်လုံးတည်း ဆိုပေမယ့် သူ့နောက်မှာ အတွေးတွေက အရိပ်ပမာ တစ်သီတတန်းကြီး ရှိနေတတ်ပါသည်။ အခုလည်း ‘သြော်’ လို့ ရေရွတ်မိပြီးအတွေးပွားမိလိုက်တာကတော့……
“သြော်…. ငါတော့ ဒီဘ၀မှာ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးပြီ၊ ငါ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်က ခေါင်းဆောင်ကောင်းပီသ – မပီသဆိုတာကိုလည်း သူ့ရဲ့လုပ်ရပ်တွေက သက်သေပြနေကြပြီ။ ဒီတော့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးသူ ငါ့တို့အနေနဲ့ ဆောင်ရွက်ရမယ့် တာဝန်တစ်ခုပဲ ကျန်ရှိတော့တယ်။ အဲဒါကတော့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းကြီးယုံကြည်စိတ်ချ အားထားရတဲ့ နောက်လိုက်ကောင်းတွေ ဖြစ်ကြဖို့…”
ဒါကြောင့် ဘယ်အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ဖြစ် အရင်ဆုံးစည်းလုံးညီညွတ်မှု၊ သည်းခံနားလည်နိုင်မှုတွေနှင့်အတူ ခေါင်းဆောင်ကောင်းများနှင့် နောက်လိုက်ကောင်းများဖြင့် တည်ဆောက်မှသာလျှင် အောင်မြင်မှု ပန်းတိုင်ကို ရောက်ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါတော့သည်။
ခေါင်းဆောင်ဆို တဲ့ နေရာဟာ …
ဇွတ် ဝင်လို့ …
အတင်း နေရာ ဝင် ယူလို့ မရဘူး ဆိုတာ တော့ လက်ခံထားတယ်။
တချို့နေရာတွေမှာတော့ လူကသာ ခေါင်းဆောင်နေရာ.. ဒါပေမယ့် ခေါင်းရှောင်တာက များနေတာကို တွေ့ရှိရတယ်…
ခေါင်းဆောင်ကောင်းနဲ့ နောက်လိုက်ကောင်းတွေ ရှိတဲ့နေရာကို ညွှန်ပေးရမလား။
သဂျီးနဲ့ ရွာသူားများရဲ့ ဒီရွာပဲပေ့ါ။
သူတပြန်ကိုယ်တပြန် ဦးသူက နှက်နေကြတာ။
စနောက်ချင်လို့ ပို့စ်ကောင်းလေးကို ဖျက်သလိုဖြစ်သွားတာတော့ တောင်းပန်ပါတယ်။
အဲဒါတော့ ထောက်ခံတယ် တီတီမမရေ…
ဒါပေမယ့် ခုနောက်ပိုင်း ငြိမ်နေကြသလားလို့လေ….
ပြီးရင် သူ့ နားက ခေါင်းဆောင်အရည်အချင်းတွေကို
luluရေ…. မနောတို့အနားမှာ သင်ဆရာ၊ မြင်ဆရာ၊ ကြားဆရာတွေ ရှိကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ မနောတို့ကို ရှေ့ဆောင်လမ်းပြတဲ့သူတွေလို့ မြင်မိပါတယ်ရှင်….
.ခေါင်းဆောင် အနေအထားမှာ… နောက်လိုက်သူတွေ လိုက်ချင်အောင် ဦးဆောင်…
.နောက်လိုက် အနေအထားမှာ… ခေါင်းဆောင်သူတွေက နောက်လိုက်ခိုင်းချင်အောင် လိုက်… ရမယ်ထင့်
Leader ကောင်းတစ်ယောက်ဆိုတာ ခုခေတ်မှာ ခပ်ရှားရှားပဲ
ကတုံးတုံးပြီး.. ရေစိုနေတဲ့..အ၀ါရောင်အ၀တ် စုတ်စုတ်သာကောက်ပါတ်လိုက်..။ ဖိနပ်ချွတ်ပြီး.. မျက်လွှာလေးချ.. မြို့တပါတ်သာပါတ်လိုက်..။
လမ်းမှာ.. ထိုင်ကန်တော့ပြီး.. ခေါင်းဆောင်တင်မယ့်သူတွေတပုံ..။
ဘယ်သူဘာမေးမေး.. ဘာမှမပြောပဲသာ.. ၆လ..၆ရက် ၆နာရီ ၆မိနစ်..၆စက္ကန့်.. ၀ဇီပိတ်နေ..။နောက်လိုက်တွေ ပိုပိုလို့များ..။
အဲ.. လူလစ်သလိုလိုရှိပြီဆို.. .. ပါးစပ်က..ပွစိပွစိ မသိမသာလုပ်..။
ဖြစ်နိုင်ရင်.. ဗမာတွေမသိတဲ့.. ဘာသာစကားအသစ်တခုကိုသာထွင်ပြီး.. ရွတ်..။
ညဆိုအခန်းတခါးအလုံပိတ်ပြီး.. ပွဲဈေးတန်းကခိုးဝယ်ထားတဲ့.. မီးရှုးမီးပန်း.. တညတခုနှုန်းနဲ့.. ၂ပါတ်ခြား အခု ၂၀ ရှို့ပေး..။
ပြည်နယ်အသီးသီးကသာမက… … နိုင်ဂျံဂါးရောက်.. တပည့်တွေပါတန်းစီပြီးပေါ်လာလို့.. ငွေတွေပုံပေးဦးမှာ.. လှူဦးမှာ…။
ကိုယ့် ပိုက်ဆံနဲ့ကို အမုန်းခံနေတဲ့ လူမျိုး ဒီ တစ်ယောက်ပဲ တွေ့ဖူးတယ်။ (ဘယ်မှ မကျိနဲ့၊ တဂျီးကို ပြောနေဒါ)
ပိုက်ဆံပေး ရေးခိုင်းတဲ့ ဆိုဒ် ရဲ့ အက်မင်ကို
ဒီ အမုန်းခံပြောတဲ့ ဒီ စကားတွေ ကြောင့် မကောင်းထင်တဲ့ လူတွေလည်း ဒီရောက်မှ တွေ့ဖူးတာပဲ။
အနိပ်စ ဒွတ်ခ အနတ်တ
ငယ်တုန်း က အရိုက်ခံထားရတာ မို့ ကေးဝဋ် ပုဏ္ဍား လို အမာရွတ်မြင်တိုင်း အနာဟောင်းထ နေတာ မို့ ခွေးလွှတ်ကြပါ။ lol:-))))
ကိုရင်ဘ၀မှာတောင်.. အဖွားဝိတ်နဲ့.. ဆရာတော်က.. ကျုပ်တို့ညီအကိုတွေကို.. ကြိမ်းမောင်းတာတောင်မရှိ..
အရောင်တွေ.. အရုပ်တွေ.. ယူနီဖောင်းတွေကိုးကွယ်ရင်.. အဲလိုစိတ်တွေဖြစ်တော့တာပဲ..
ဘုန်းကြီးကောင်းတွေ အများကြီးရှိတာ သိပါတယ်.။
ယူအက်စ်ကို ကြွလာတုံး.. ဆွေးနွေးဖူးသူတွေလည်းအများကြီး..။
အခုလိုဖြစ်နေတာကို သိတဲ့..ဘုန်းကြီးတွေလည်း.. အများကြီး..။
အံ့သြစရာကောင်းတာက.. သိတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကျ… ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မဖြစ်.. .. အဆင်မပြေကြဖူးပဲ..။
. နောက်လိုက်ကောင်း ဖြစ်ဖို့ ခေါင်းဆောင်ကောင်း ရှိဖို့ လိုသေးတယ်လေ မနောရဲ့။
. ခေါင်ရှောင်ကောင်း နောက် မှာတော့ နောက်လိုက်ကောင်း လုပ်နိုင်ပေါင်။
ဂေါင်းကောင်းတဦးဖြစ်ဖို့ နောက်လိုက်အဆွယ်ကောင်းကောင်း ရှိရမည်လေ…
ဒါဆို ဘယ်လိုလူမျိုးတွေလဲ သေချာပြောဦးလေ… လေ့လာလို့ရတာပေါ့